အဖိုး နဲ့ အဖွား | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
တို့ နံပါတ် ၁ ကွ။
တိုလဲ kmsl ကို အရိပ်ကြည့်နေတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ဟုတ့်ပါ. သင်သည် အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး ဆိုလျင် သိပါလိမ့်မည်
ငါ့အရင် လေးယောက်တောင် ကွန်မင့်သွားပြီဆိုပြီး အားငယ်နေတာ။ အခုတော့…. မခင်ဦးမေ လေးကိုယ်ခွဲကိုး။
ဦးသုခအကြောင်းဖတ်ရတာ မတွေ့ဘူးပေမယ့်လွမ်းပြီး ရဟန်းစားရသောဆွမ်းတနပ်တို့။ တပါးသီလတို့ကို ပြန်ကြည့်ချင်စိတ် ပေါက်မိတယ်။ ရွှေခြည်ငွေခြည်သန်းပါလို့ ကလည်း ဘဘဘဲရိုက်တာဘဲမို့လား။ အရမ်းကောင်းတယ်လေ။
ရှင်မင်းဘဝမှာ စကားပြောဘူးချင်တဲ့ လူတော်လူကောင်းထဲမှာ ဘဘဦးသုခပါပါတယ်...
ဆရာမရေ..ပြောပြပါဦး..ဆရာမနဲ့ တူတဲ့ အဖွားအကြောင်းတွေ...
ချိုသင်းရေ… ဘဘဦးသုခနဲ့ အတူနေခွင့်ရလိုက်တာ သိပ်ကံကောင်းတာပဲနော်…
အဲဒီတုန်းကသိရင် ချိုသင်းတို့ အိမ် လာလည်ပါတယ်…
တို့ က နှစ်ဘက် အဖိုးအဖွားတွေ အပြင် အဘိုးအဖေထိမှီလိုက်တယ်… ခုတော့ ဖေဖေ့အဖေ တယောက်ထဲ ရှိတော့တာ…
ချိုသင်း အမျိုးသားက ဘမျိုးဘိုးတူပေါ့… မိန်းမကို ချစ်တတ်တာလေ…
ချိုသင်းနဲ့ဒီတခါလဲ တိုက်ဆိုင်ပြန်ပြီ… တို့ အမျိုးသားကလဲ တို့ ကို သူ့ အဖွားနဲ့ တူတယ်တဲ့…
ကြောက်တတ်တာ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာ ပြီးတော့… ကြိုက်တာတခုဆို သဲသဲမဲမဲ စားတတ်တာ… သူ့ အဖွားတော့ မမြင်ဖူးလိုက်ဘူး… ကောင်းတာ တခုမှ မပါဘူးနော်…
ဘဘဦးသုခကိုတစ်ခါမှ အပြင်မှာ မဆုံခဲ့ဖူးဘူး
ဘဘဦးသုခကို အပြင်မှာ တခါမြင်ဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်း အမေ သီတင်းကျွတ်သွားကန်တော့တာ လိုက်ပို့ ပေးရင်း နဲ့ ရောကန်တော့ရင်း ဆုံးမစကားလေးတွေပါ နားထောင်ခဲ့ရဖူးတယ်။
တောင်ဝှေးလေး ပါမလာတဲ့ အဘိုးကို သနားသွားတယ်။
အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ အတူတူနေခွင့် ဆုံခွင့်ရတာ တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အဘိုးအဘွားတွေ ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်တွေ အကြောင်းအရာတွေက အဖေအမေ ပြောတာနဲ့တောင် မတူဘူး။
အနော်လည်း လူကြီးတွေကို ချစ်တယ်။ ဘလော့ထဲမှာတောင်မှ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ အကိုအမတွေကို ပိုလည်ဖြစ်တာ ကြည့်.. ဟိ။
အမရေ ကျနော်က အဖေ့ဘက်က အဖွားတစ်ယောက်ပဲ မှီခဲ့တာပါ.. ကျနော် တတိယနှစ်လောက်ရောက်မှ ဆုံးသွားရှာတယ်...
အဖွားကလည်း မြေးတွေကိုချစ် မြေးတွေကလည်း အဖွားဆို ချစ်... အဖွားဆိုတာကိုက နတ်ပြည်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ ကလေးတွေချစ်တဲ့ နတ်သမီးအကြီးကြီးလား မသိဘူး...တမျိုးလုံး ဝိုင်းချစ်လိုက်ရတာ...
- မဇနိလည်း ကျနော့်အဖွားနဲ့ တူတော့မယ် ဟ ဟ
လာဖတ်၏.. အမနဲ့တူတဲ့ အဖွားအကြောင်းပဲရေးလေ
အမ မုန့်ချွဲသင်း အဲဟုတ် ပေါင် အမချိုသင်း အချွဲလေးလို့ ပြောတာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွေလည်း အဲလိုတွေပြောပြတယ်ပေါ့လေ။ အဖိုး အဖွားတွေနဲ့ နိနိလည်း မနေခဲ့ရဘူး။ သေချာတာကတော့ ကိုကြီးကျော်က အမချွဲတာကို ချစ်နေတာပါလေ။
ကျနော်ကျတော့ အမေဖက်က အဖိုးအဖွားနဲ့မှီလိုက်သေးတယ်..
အဖိုးဆုံးတာ၂နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ မချိုသင်းက အဖိုးအဖွားအကြောင်း ပြောလာတော့..
အိမ်ပြန်တိုင်း အဖိုးက ငိုတယ်..ခွင့်စေ့လို့ ပြန်လာရတိုင်းလည်း အဖိုးငိုတယ်..
အခုထိ အမေ့ရဲ့ အမေ အဘွားရှိသေးတယ် အမရေ.. အမ အဖွားနဲ့ တူတာလေးတွေလည်း ပြောပြပါဦး... ကျနော့် အဘွားကတော့ အသက် ၈၀ ကျော်ပြီ။ ဖုန်းဆက်ရင် သူ့အတွက် ဂျပန်ချောချောလေး တစ်ယောက် ပါဆယ်ပို့ပေးစမ်းတဲ့.. အဟီး.. အဲဒီလို နောက်တာ..
Ma Gyi Moe Cho,
Please write some more on your naughty things. Very nice to read......
ဘဘဦးသုခလို legend တွေနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တာ
link ပေးလိုက် :)
ချိုသင်းက ချစ်မွှေးပါပြီးသား လူပေါင်းစုံက ချိူသင်းကို ချစ်ကြ ခင်ကြတာဘဲမဟုတ်လား။ အမေ့ဘက်က အဖိုးဘဲ မှီပါတယ်။ အဖိုးက အသက် ၁၀၀ နေသွားရတယ်။
နှစ်ဖက် အဖိုး၊အဖွားကို ကောင်းကောင်းမှီတယ်ဗျ။ အမေဖက်က အဖိုးကို ပိုချစ်တယ်။ အရမ်းအလိုလိုက်လို့...P
ဘဘ ဦးသုခကိုတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကော၊ စာရေးတာပါ အရမ်းကြိုက်တာဗျ။ အပြင်မှာ မမြင်ဘူးလိုက်ဘူးဗျာ။
မမိုးချိုရေ .. စာဖတ်ပြီး ငိုချင်လိုက်တာ.. ဖိုးဖိုး နဲ့ ဖွားဖွား တို့ကို သတိရလို့။
ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ရင်း စာရေးသူရဲ့နှလုံးသားကို မြင်နေရတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ့်အိမ်ကိုလည်း လာလည်ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်။
တခါတလေ ပြောပြရင်း ကိုယ်က မျက်ရည်တွေကျပြီး ငိုလို့။ အဲဒီလို တဲ့-ဘဘရဲ့ ဆိုပြီး နှပ်တွေဘာတွေ ညှစ်လိုက်သေးတာ။ ............
ကျနော်တို့ ဆီ လာလည်ပါလားဗျာ ..မမိုးချိုလာမှ တိုက်တန်းနစ် ဇာတ်ကားပြန်ကြည့်မယ်....
ပြီးရင် အားမနာတမ်း...တူတူ ငိုကြတာပေါ့....။
ဘဘ ဦးသုခနဲ့ တွေ့ ၇တာ ကံကောင်းတယ်...
ဘဘလိုရုပ်ရှင်ပညာရှင်ကြီးကို TV ထဲ ၀င်မတတ် ဘာသာပြန်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာ....
မိုးချိူသင်း သူများတွေ ဘလော့မှာတောင် live ပြနေကြပြီ.
ရိုးရိုးကြီး ဖြစ်နေပြီ။ အစ်မဖြင့်ရှက်လိုက်တာ။ :P
ရဲရဲနှိပ်ပါ virus မပါပါဘူး ။
အသက်ကြီးတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေနဲ့ စကားပြောရတာ မင်္ဂလာတပါးပါ အစ်မရေ ...။ အဲဒီထဲကမှ ပညာဥာဏ်ရင့်သန်တဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို ကြုံခွင့်ရတာ ပိုပြီးမင်္ဂလာရှိတာပေါ့ နော်။
ဟာဗျာ.. ဖိုးဖိုးနဲ့ ဖွားဖွားဇာတ်လမ်းများရဲ့ နောက်ဆုံးလှည့်ကွက် ကြယ်သီးကို ခုမှ သိမိတယ်...။
ရသများကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဘလော့ဂ်မို့ သတိထားမိပါတယ်...။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ အကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ ဘဘ ဦးတင်မိုးရဲ့ ရင်နစ်သည်းချာမို့ ပိုဂရုဝိုက်မိပါတယ်..။
သို့သော်လဲပေါလေ့... ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်က ခွင့်ယူနေတာများ... ကိုယ်လာကြည့်တိုင်း အိမ်လေးက လူမရှိပဲ သော့လေးနဲ့ ဟောင်းလောင်း ဖြစ်နေခဲ့တာဆိုတာတော့ နောက်များ လမ်းကြုံမှပဲ အိမ်ပြန်ရောက်မရောက် လာကြည့်မယ်ဆိုပြီး တေးထားတာ...။
ဆက်လက် ချီတက်ပါ...။ ရသစာပေများနဲ့ ငတ်နေတာ အတော်ကြာရော့...။
အဖိုးနဲ့အဖွားကိုဖတ်ပြီး အဖိုးအဖွားတွေကို လွမ်းသွားပါတယ်ရှင်...
မြေးရဲ့ချစ်သူကို အန်ပေါင်းပေးတဲ့ အဖိုးလေး...
တောင်ဝှေးကျန်ခဲ့လို့စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ အဖိုးလေး...
ကြယ်သီးလေးတွေနဲ့အဖွားကိုချော့တဲ့ အဖိုးလေး...